Markabkii MV Daesan oo ay la baxsadeen ciidamada Bada Puntland (Sarancen) • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Markabkii MV Daesan oo ay la baxsadeen ciidamada Bada Puntland (Sarancen)
Markabkii MV Daesan oo ay la baxsadeen ciidamada Bada Puntland (Sarancen)
December 19, 2012 - By: Khalid Yusuf
MV Daesan oo taagan xeebta Bosaaso 18kii November 2012
Waxaa maalinimadii shalay soo shaac baxday in magaalada Bosaso lagala baxsaday markabkii MV Daesan oo laga lahaa dalka Waqooyiga Kuuriya (North Korea) oo ay dhawaan soo qabteen ciidamada Bada ee Puntland.
Markabkan MV Daesan ayaa lasoo qabtay bishii lasoo dhaafay ee November xili uu meel u jirta magaalada Bosaaso 13mile ku daadinayey Shimiito xumaatay.
Shimiitadan ayaa la sheegay in ay lahaayeen ganacsato ku sugan Muqdisho, balse diiday inay qaataan Shimiitada kadib markii ay ku xumaatay biyaha bada oo gaaray xamuulkii shimiitada ahaa ee Markabkaasi uu siday.
Shaqaalaha markabkan MV Daesan oo laga leeyahay wadanka Waqooyiga Kuuriya ayaa muddo todobaad ku dhaw shimiitada ku daadinayey bada Puntland, waxaana lasoo qabtay 18kii bishii November.
Markabkan ayaa waxaa lagu soo xiray dekkada Magaalada Bosaaso waxaana dulsaarnaa si joogto ah (heeb iyo maalin) ciidamo gaaraya 12 askari oo ka tirsan ciidamada Bada ee dhawaan tababartay shirkadii Saracen.
Ciidamadan oo ahaa kuwii markabka soo qabtay ayaa in muddo ah si toos ah uga amar qaata Madaxtooyada Puntland, waxaana la sheegaa inuu hada dusha sare ka maamulo wiilka Madaxweynaha ee Maxamed Cabdiraxmaan Faroole, kuna magacaaban lataliyaha Madaxweynaha ee dhanka Saxaafadda.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Bada ee Puntland oo u waramay Horseed Media ayaa xaqiijiyey in shalay gelinkii danbe uu markabka ka furtay xeebta dekkada Boosaaso oo uu ku xirnaa todobaadyadii lasoo dhaafay, ayadoo la xaqiijiyey inay la baxsadeen askartii saarnaa Markabka oo illaalada ka hayey.
Joojintii Mashruucii Saracen
Waxaa xusid muddan in sanadkan la joojiyey Lacagtii uu wadanka Imaaraatka ku bixin jiray ciidamada Bada, kadib markii ruqsadii lagala noqday shirkada Saracen ee ciidamada tababari jirtay. Arrimaha ugu waaweyn ee mashruucan loo joojiyey ayaa waxaa kamid ah cadaadis ka yimid dhanka Qaramada Midoobay iyo waliba musuq maasuq lagu sameeyey sida la sheegay mashruucaasi oo ay ku baxday lacag ku dhaw $30.000.000 (Sodon Milyan) oo dollarka Maraykanka ah oo ay bixisay Imaarada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Ciidamada Bada ee Puntland oo ayagu loo qorsheeyey inay qaataan askarigiiba $600 dollar bishii ayaa qaadanayey lacag gaareysa $150 dollar bishii, manacada mushaharaadka kale cid qaadatay, arrimahan ayaa soo dadajiyey in mashruucan ay soo afjarto Imaarada Abu Dhabi lacagtii ay ku bixin jirtay. Waxaa sidoo kale jiray xiriir hoose oo ay wada yeesheen shirkada Saracen iyo Madaxda Puntland arrintaasi oo lagu sheegay mid aysan horey wax ugala socon dowlada Imaaraadka Carabta.
Tan iyo intii mashruucan la joojiyey ee bishii June 2012, ayaan waxaa mushaharkooda sidii la rabay u qaadaneyn ciidamada Bada ee Puntland, walow ay Madaxtooyada Puntland ay bilowday inay ayadu mushaharka siiso ciidamada qaarkood iyo waliba 10 askari oo cadaan ah oo ka haray shirkadii Saracen, kuwaasi oo ah duuliyayaasha diyaaradaha shirkadaasi uga tagtay maamulka Puntland.
Macada askartan kaxeysatay markabka inay amar ka heysteen saraakiisha u talisa iyo inkale, balse baxsashada markabkan ayaa buuq weyn xalay ka dhaliyay xarunta Madaxtooyada Bosaaso oo uu xiligan ku sugan yahay Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole.
Sidoo kale saraakiisha Madaxtooyada iyo Taliska sare ee ciidamadan ayaa ka gaabsaday warkan ayadoo aan illaa iyo hada la aqoon meesha uu markabkan ciidamada la sheegay inay afduubeen u kaxaysteen.
Halka xubno kamid ah dowlada Puntland ay si hoose saxaafadda ugu sheegayaan in markabkan loo kaxeystay in ciidamada Bada ay ku fuliyaan hawlgalka furashada markabkii MV Iceberg 1 oo ku sugan meel u dhaw xeebta Garacad.
Wiilka Madaxweynaha ee Maxamed Faroole oo muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada Bada amarka sida tooska ah uga qaadanayeen ayaa xiligan la sheegay inuu ku sugan yahay magaalada Eyl ee xeebta gobalka Nugaal, qaar ka kale ee kamid ah saraakiisha ciidamadan Bada ayaa ayagu ku sugan deegaanka Garacad oo halkaasi weli ka taagan tahay xiisadii Markabkii MV Iceberg 1 oo ay ciidamada isku dayeen inay furtaan balse weli lagu guuleysan la’a yahay in laga dajiyo burcad badeeda saarneed markabkaasi.
Arrintan soo shaacbaxday ee Markabka Waqooyiga Kuuriya ayaa noqoneysa mid waji gabax weyn ku ah dowlada Puntland oo ayadu horey u sheegtay in ciidamada ay tababartay shirkada Saracen ay yihiin kuwa kaliya ee burcad badeeda ka hortagi kara, ayna la yaab noqoneyso in isla ciidamadaasi ay hada afduubaan markabkii ay illaalinayeen. Dowlada Puntland ayaan arrintan weli wax war ah kasoo saarin.
Murrankii Wasaaradda Dekkadaha iyo Maxamed Faroole
Waxaa todobaadyadii lasoo dhaafay soo baxayey in murran xoogan uu ka jiray markabka Shimiitada waday ee MV Daesan, kadib markii la sheegay in dowlada Puntland ay markabkaasi ku ganaaxday lacag dhan $2.000.000 (laba milyan) oo dollarka Maraykanka ah.
Lacagtan weli lama bixin sida ay Horseed Media u xaqiijiyeen xubno ku sugan Madaxtooyada, ayagoo intaasi raaciyey in lacagtan ayadoo aan weli soo gaarin Puntland ay murran ka dhex abuurtay Wasaarada Dekkadaha & Gadiidka bada iyo Maxamed Cabdiraxmaan Faroole oo asagu hada hogaanka sare u haya ciidamada bada ee Puntland.
Murrankan ayaa la rumeysan yahay inuu ka dhaxeeyey Wasiirka Dekkadaha iyo Gaadiidka Bada ee Puntland Eng. Siciid Maxamed Raage iyo Maxamed Cabdiraxmaan Faroole, kadib markii uu Maxamed diiday in lacagtan ganaaxa ah lagu shubo khasnada Wasaarada Dekkada iyo Gaadiidka Bada isla markaana uu sheegay in lagu soo wareejiyo khasnada ciidamada Bada ee Puntland oo ayagu soo qabtay Markabka kuwaasi oo ah kuwa hada gacanta ku hayey.
Illo xog ogaal ah oo u waramay Horseed Media ayaa sheegay in Wasiirka Dekkada Puntland Eng.Saciid Raage soo jeediyey in Markabka lagu soo xiro Dekkada Bosaaso, isla markaana shaqaalaha saaran la horgeeyo Maxkamada Bosaso, arrintan waxaa ka horyimid Maxamed Faroole oo asagu amarka ku baxshay in Markabka lagu hayo meel ah duleedka dekkada Bosaaso, markabkana laguma soo xirin dekkada halkaasi oo ay ku hayeen ciidamada hada la sheegay inay la baxsadeen.
Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa arrintan ku dhex jiray walow aan la ogeyn go’aankii ugu danbeeyey ee laga qaatay sida laga yeeli lahaa lacagtaasi ganaaxa ah ee gaareysa 2 milyan oo dollar.
Hase yeeshee dhacdada soo korortay ee ah in Markabkiiba lala baxsaday ayaa xaalada waji kale u yeelaysa, ayadoo hada sida la sheegay dowlada Puntland ka munaaqashooneyso sidii markabkaasi loogu soo celin lahaa ayadoo la sheegay in xiriiryo dhanka isgaarsiinta ah lala sameeyey 12ka askari ee markabkan la baxsaday. Waxayna xubno ku sugan Madaxtooyada sheegeen hada balan qaad loo sameeyey ciidamadaasi in waxa ay ka cabanayaan loo sameyn doono, isla markaana soo ceshaan Markabka ay kaxeysteen.
Qaar kamid ah xubnaha dowlada mucaaridka ku ah ayaa ku tilmaamay dhacdadan mid shaki badan ku jiro ayagoo sheegay in ay hayaan xog ah in shirkadii Markabkan lahayd ay diiday inay bixiso lacagta ganaaxa ah ee $2 Milyan ee la dulsaaray.
Markabkan MV Daesan ayaa ah mid duqoobay isla markaana bishii July ee sanadkan ayuu bada quusi gaaray, waxaana gurmad u fidiyey ciidamada bada ee wadanka Cumaan xili uu marayey Gacanka Cadmeed, waxaana la sheegay in markabkan uu yahay mid xaaladiisa ay aad u liidato, taasina sababtay in shirkadaleh markabkan ee Waqooyiga Kuuriya ay diideen inay bixiyaan lacagta Puntland ku ganaaxday.
MV Daesan oo khatar galay bishii July 2012
[Halkan ka akhriso Gurmadkii loo fidiyey markabkan MV Daesan bishii July ee sanadkan 2012]
Arrintan Afduubashada Markabka ayay dadka qaarkiis sheegayaan in ay ka danbeeyaan dhanka saraakiisha Puntland ee doonaya in shirkada markabkan leh ay bixiso lacago, madax furasho ah hadii ay ganaaxa diideen. Markabkan ayaa waxaa saaran 33 badmaax oo u dhashay dalka Waqooyiga Kuuriya.
Wixii arrintan kusoo kordha gadaal baan idiinka soo gudbin doonaa haduu eebo idmo.